Nnukwu ụlọ nke Vilafamés, na-agba akaebe na akụkọ ihe mere eme nke otu obodo | Njem zuru oke
Nnukwu ụlọ nke Vilafamés, gbara ama akụkọ ihe mere eme nke otu obodo
Otu n'ime obodo ndị elere anya dị ka nke mara mma na nke ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ị gara ma ọ bụ si n'ógbè Castellón bụ Vilafamés, yana nnukwu ụlọ ya a ma ama nke m chọrọ ikwu ntakịrị banyere ya taa.
Nnukwu ụlọ nke Vilafamés dị na ngwụsị elu nke obodo ochie ahụ, mana atụla ụjọ, nnweta ya dị mfe. N'agbanyeghị site na peeji nke ime obodo ha na-akwado ụzọ ga-eduga anyị na ya. Ọ ga-esi na Plaza de la Fuente, site na Roca Grossa, wee si ebe ahụ gafere Calle Cervantes na Calle de la Iglesia, wee rute Plaza de la Sangre, ebe ị nwere ike ịnweta Quartijo ebe ụlọ kacha ochie. nke ndị bi na site na steepụ ndị ahụ na-agbago na nnukwu ụlọ.
Este nnukwu ụlọ bụ nke Muslim, Ntọala ya na akwụkwọ ya dị iche iche na-ezo aka na mmeri Beni-Hamez nke Eze Jaime nke Mbụ nke Aragon na nke ahụ bụ mgbe Vilafamés dị ugbu a na-ewere akụkọ ihe mere eme. Mmeri a dugara n'eziokwu na n'August 30, 1241, Jaime I nyere Guillem Ramón de Viella, Domingo Ballester, A.Cabrera na ndị ọzọ ndị ọzọ ka ha nye ya kaadị ndị mmadụ.
Otú ọ dị emechiri ogige ahụ na narị afọ nke iri na anọ site na Order nke Montesa na, ọ bụ site n'oge a ihe echekwara N'oge a, mgbe ị gara nnukwu ụlọ ahụ, ihe ị hụrụ bụ usoro mkpọchi nchekwa, ma ọ bụ obere echekwara ya, ya na nnukwu ụlọ elu nke na-achịkwa ihe mgbagwoju anya na obodo ahụ kpamkpam.
Towerlọ elu nke Vilafamés, nke a na-akpọ Torre del Homenaje, dị okirikiri na elu trococonic, na ọtụtụ oghere ndị gbara ya gburugburu. N'oge agha Carlist Narị afọ nke XNUMX ọ bụ ndị oji egbe na egbe.
Getga Vilafamés ị kwesịrị ịnweta site na CV-10, okporo ụzọ na-aga Sant Mateu; N'ebe dị elu nke Pobla Tornesa, gbagoo Albocàsser na CV-15 na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo ahụ, ị ​​na-ahụ ntụgharị na CV-160 nke na-eduga obere obodo na echiche ndị a na-apụghị ịnakwere na ị nwere ike ịnụ ụtọ site na nnukwu ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nnukwu ụlọ nke Vilafamés, gbara ama akụkọ ihe mere eme nke otu obodo
Akwụkwọ mmado Russia
N'ihi na ọkọlọtọ nke Austria na-acha uhie uhie na ọcha